‘मधेस शब्द उच्चारण गर्न कन्जुस्याइँ गरे, मधेसीको आँसु पुछ्न सय करोड दिए’
२०७५ वैशाख ३० गते १४:३६
तीर्थयात्रीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको शुरुवात मिथिलाको साँस्कृतिक राजधानी मानिने जनकपुरधामबाट गरे । र, केबल दुई दिनको उनको नेपाल भ्रमण तीर्थाटन जस्तै नै देखियो । रामकथाअनुसार जगत जननी भनिने जानकी महाराज जनकको राज्य जनकपुरमा नै हुर्के बढेकी थिइन्...
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सिन्डिकेट पनि तोड्नुपर्छ (सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
२०७५ वैशाख २८ गते १६:३७
सम्माननीय सभामुख महोदय, समय दिनुभएकोमा म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दछु । मैले केही अन्य विषयहरु राख्नको लागि समयको माग गरेको थिएँ । किनकी संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनपश्चात् बनेको यो गरिमामय संसदमा मैले पहिलोचोटि उभिँदा केही अनुभूति राख्न चाहेको थिएँ ।...
राम कार्कीले भनेः खतरा भो !
२०७५ वैशाख १२ गते १७:४०
नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले आफूहरु खतरनाक स्थितिमा आइपुगेको बताएका छन् । काठमाण्डुमा बुधबार आयोजित कार्ल मार्क्स जन्म द्वीशतवाषिर्की समारोह समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । प्रस्तुत छ सांसद कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचारका मुख्य अशंः नेपालमा...
अन्नबाली भन्डारणमा देखिने समस्या र समाधानका उपाय
२०७५ वैशाख १० गते ७:०२
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएपनी नेपाली जनता अझै खाध (सुरक्षाको दृस्टिले निकै नाजुक अवस्थामा रहेका छन् । सरकारी तथ्यांकमा उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ तर, उत्पादनपछी हुने क्षतीका कारण नेपाली जनता खाध संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषक आफूले भित्राएको बालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने...
यी हुन् एमाले–माओवादी एकता नहुनुका प्रमुख ३ कारण
२०७५ वैशाख ६ गते ७:५७
काठमाण्डु, ६ बैशाख– बैशाख ९ गते हुने भनिएको माओवादी एकता अनिश्चित बनेको छ । यससँगै एकता हुने वा नहुनेमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एकता नहुनु भनेको प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नु मात्र होइन, जनताले वाम गठबन्धनलाई...
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे पूर्वराजदूत रणजीत रायको बयान
२०७४ चैत १२ गते ६:४६
अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो छ । हालसालै पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलबाहेक वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादव, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दिल्ली आएर जानुभएको छ । कांग्रेस र एमालेका दुईवटा प्रतिनिधिमण्डल आएर फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको यो सन्देश हो । नेपालमा संविधान जारीसँगै कार्यान्वयन भएको छ । केही चुनौतीबीच नेपाल अघि...
बंगाली पाइलट भन्छन्ः काठमाण्डुमा विमान दुर्घटना हुनैपर्ने थियो
२०७४ चैत ४ गते १३:३५
म एकदम निराश र डिस्टर्ब छु । यो दुर्घटनाले प्रतिक्षा गरिरहेको थियो । सुरक्षा संस्कृति वा साँचोभन्दा निजी क्षेत्रमा यसको अभाव एकदम उदेकलाग्दो छ । मलाई थाहा छ,पाइलटहरुलाई जोखिमयुक्त अवस्थाहरुमा पनि उडान गर्न व्यवस्थापनले दबाब दिन्छ । उडानको सुरक्षामाथि व्यवसायिक स्वार्थहरु हाबी हुन्छन् ।...
यी हुन् सलमान खानका कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्नाका कारणहरू !
२०७४ फागुन ३० गते ११:३५
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले फागुन १५ गते प्रेस विज्ञप्तिद्वारा नेपालको राजधानीमा अवस्थित सैनिक मञ्चमा फागुन २६ गते अर्थात् मार्च १० मा आयोजना गरिएको भारतीय अभिनेता सलमान खान सम्मिलित ‘दबंग द टुर नेपाल’ कार्यक्रमको सशक्त विरोध ग¥यो । महासङ्घको आधिकारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक...
२०७४ फागुन २८ गते १२:३४
कैलालीका मेयर ममताप्रसाद थारुले बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी राधा चाैधरीको रोधन सुनेनन् । सुनेर उनलाई फाइदा पनि थिएन । नसुनेका कारण बेफाइदा पनि केही भएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा दुई चार दिन कोकोहोलो मच्चिन्छ । आखिर हिसाव ममताप्रसादकै पक्षमा पर्नेछ । दुनियाँका नजरमा बदनाम भएपनि...
नारीवाद माक्सवादी महिला मुक्ती आन्दोलनको प्रवृती
२०७४ फागुन २४ गते १२:४१
एउट काल खण्ड थियो त्यो वेला समाजमा मातृ सत्ता थियो । (देविदेवताको काल ) श्रम विभाजन र निजि सम्पतीको थालनी संगै क्रमश मातृ सत्ताको ठाउँ पितृ सत्ताले लियो । पितृ सत्ताले महिला जैविक हिसावले कम्जोर हुँने भनि व्याख्य गरियो । वौद्धिक हिसावले पनि कम्जोर...
भन्सारमा छोड्ने तर दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य !
२०७४ फागुन २४ गते ११:०२
हामी असिमित दायित्वको चाङमाथि बसेर उच्च आर्थिक बृद्धिको लागि साधन परिचालन गर्ने र सम्भवतः आर्थिक अनुशासन पनि पालना गर्दै करदाताहरुले तिरेको करको अनुभुति विकासमा प्रतिविम्बित होस भनेर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामी चुनौतिपुर्ण अवस्थामा छौं । असिमित दायित्व व्यवस्थापन मन्त्रालयजस्तो भएको छ अर्थमन्त्रालय।...
२०७४ फागुन २२ गते ७:३४
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा फेरि निर्वाचित भएका छन् । देशको वरिष्ठ प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आफ्नो नेता छान्दा कोही कसैलाई आपत्ति हुने ठाउँ छैन । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको असाधारण पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको बिगुल ध्वनि फेरि नेपथ्यमा हराएकोमा पनि कसैलाई...
« अघिल्ला 1 …34567… 68 पछिल्ला »